Microsoft office / Photoshop / 7-8 Activator နှင့်ကွန်ပြူတာအသုံးဝင်ဆော့စ်ဝဲများစုစည်းမှု (10MB) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Microsoft office / Photoshop / 7-8 Activator နှင့်ကွန်ပြူတာအသုံးဝင်ဆော့စ်ဝဲများစုစည်းမှု (10MB)
Posted on November 5, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအသုံးဝင်ဆော့စ်ဝဲများဖြစ်တဲ့ Windows7activator (32 / 64bit ) | Windows 8activator (32 / 64bit ) | Microsoft Office Woed 2013 (32 / 64 bit ) Full Version ရယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနည်းကိုအသေးစိတ်ရေးထားတဲ့ (E-Book)လေးကိုပါတွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့Windows7အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို | Windows 8 အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို | ပြီးတော့ Photoshop CS8 Full Version လေးပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် (10MB ) ပဲရှိပါတယ်။ ဒါလေးကိုအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ပြီးတော့မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အချိန်မရွေး ဒေါင်းယူလို့ရအောင် တိုက်ရိုက်လင့်ကနေ ဒေါင်းယူပါ။ဒေါင်းလင့်အတွက်တော့စိတ်ချပါ။ဘယ်တော့မှလင့်မသေပါဘူး။ အထဲမှာမြန်မာလိုရေးပြီး ပုံနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
ကြော်ငြာလေးတစ်ချက်လောက်ကလစ်ခဲ့ပါချစ်သူငယ်ချင်းတို့ရေ…. ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
This entry was posted in Office နှင့်ဆိုင်သော, Photoshop Software, Software, Windows Activator. Bookmark the permalink.
← ဆားဗစ်သမားတွေအတွက် Mobile ODIN Pro V-3.85	Bing Desktop Setup for windows (17MB) →